Allgedo.com » Shariif Sheekh Axmed oo hadal ka jeediyay xildhibaanada hortooda ka dib guul daradiisa (Dhageyso)
Home » News » Shariif Sheekh Axmed oo hadal ka jeediyay xildhibaanada hortooda ka dib guul daradiisa (Dhageyso) Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Shariif Sh. Axmed oo ahaa madaxweynihii dowladdii TFG caawana laga guuleestay ayaa guul daradiisa ka dib waxa uu jeediyay khudbad uu ka;ga hadlay arimo kooban oo ku aadan qaabka ay u dhacday doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Waxa uu hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Jawaari, waxaana sidoo kale uu u mahad naqay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Shariif Sheekh Axmed ayaa dhanka kale sheegay inuu ku faraxsanyahay muddo badan ka dib in dalka Soomaaliya lagu qabto doorasho heerkaan oo kale ah.
Halkaan ka dhageyso Khudbaddii Shariif Sheekh Axmed.